जीवनशैली Archives - Page2of 19 - Voice Of Nepal
बुढ्यौली दिनदिनै महंगो हुँदैछ । संभव भएसम्म, आउँदो पीढींले गरिरहेको काम छाड्ने बिचारलाई सधैका लागि त्याग्नुहोस् । के गर्ने, जब हामी बुढो हुन्छौ ? के हामी काम गर्नका लायक रहन्छौ ? के कसैले हामीलाई काम ...
शरीर स्वस्थ राख्नको लागि व्यक्तिको रगतको प्रवाह पनि सही मात्रामा हुनु पर्छ । जीवन जीउनको लागि अक्सिजनको मात्र होइन शरीरको रक्त संचार पनि सही हुनु आवश्यक छ । रगतले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको साथसाथै अक्...
कुनैपनि कुराबाट हामीलाई त्यहीबेला बढी सन्तुष्ट मिल्छ, जब हाम्रो शरीर ठिकठाक छ । जब शरीर नै ठिक छैन भने जतिसुकै मिठो खानेकुरा पनि रुच्दैन, जतिसुकै राम्रो ठाउँमा पनि मन बहलाउँदैन । यसको अर्थ के भने, हाम...
छालाको समस्या र उपचार विधी
छाला शरीरको वाहिरी पत्र हो, जो स्वस्थ्य र सुन्दर हुन आवश्यक छ । तर, बाह्य संक्रमणले चाढै प्रभावित हुने भाग पनि छाला हो । छालाको अनेक समस्या हुन्छन् । त्यस्ता समस्याका निदान पनि खोजिरहेका हुन्छौं । तर,...
आयुर्वेद अनुसार कस्तो खानपानले शरीर निरोगी हुन्छ ?
आहार, निन्द्रा वा ब्रम्हाचर्य । यो मानव जीवनको तीन आधार स्तम्भ हो । यसमा आहार एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो । आहार के हो ? यसको बयान गर्दै महर्षि चरकले भनेका छन्, ‘अन्न–नलीद्वारा जुन पदार्थ आमाशयमा पुग्छ...
स्मरणशक्ति विकासका लागि हाम्रो जीवनशैली, खानपानको खास भूमिका हुन्छ । जब शारीरिक स्वस्थ्य ठीक हुन्छ, शरीर चुस्त र तन्दुरुस्त हुन्छ । स्मरण शक्ति तेज हुन्छ । खराब जीवनशैलीलाई त्याग्नैपर्छ, स्मरण शक्ति ह...
अहिले मोटोपन हरेकको समस्या बन्दै गएको छ । यसले शरीर भद्दा हुने मात्र होइन, रोगहरुलाई पनि जन्म दिन्छ । त्यही कारण मोटोपन नियन्त्रण गर्नैपर्ने चुनौती सबैलाई छ । मोटोपन वा तौल नियन्त्रण गरेर सुडौल एवं...
दुध आफैमा स्वादिलो हुन्छ । कतिले त्यसलाई थप स्वादिलो बनाउन चिनी मिसाउँछन् । मह मिसाउँछन् । सबैभन्दा राम्रो काइदा चाहि के भने, दुधमा सख्खर मिसाउनुपर्छ । यसरी सख्खर मिसाइएको दुधमा धिक मात्रामा सुक्रोज, ...
कपाल सौन्दर्यको एक प्रमुख हिस्सामध्येको एक हो । बलियो, नरम, लामो र बाक्लो कपाललाई सौन्दर्यको मानक बनाइएको छ । फेसन र ग्ल्यामरको यो युगमा कपालको सौन्दर्यले समग्र व्यक्तित्वमा नै खास प्रभाव पार्छ । त्यस...
अहिले जाडो याम छ । यतिबेला मर्निङ वाकमा निस्कनु त्यती अनुकुल हुँदैन, खासगरी काठमाडौंमा । चिसोमा मर्निङ वाक गर्दा फाइदा होइन बेफाइदा गर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । यस्तो बेला घरभित्रै बसेर योग गर्न सकिन...